Kombuyuutarrada Zombies iyo Botnet Malware - Khabiir Kala Duwan Oo La Sheegi Karaa Jawaabta Inay Ku Fiicnaadaan Ama Ama Ku Fiican Kumbuyuutarkaaga
Kombiyuutar aamminsan waa qalab ku xiran internetka kaas oo ay ka soo horjeedaan hackers. Waxaa loo isticmaalaa hawlaha xaasidnimada ah iyo botnets of zombies waxaa loo isticmaalaa in lagu faafiyo spam iyada oo emails. Waxa kale oo ay soo saartaa weerarrada adeegga diidmada. Milkiilayaasha kumbiyuutarrada xasaasiga ah xitaa ma ogaan karaan in nidaamkoodu uu hoos u dhaco maaddaama barnaamijyadani ay si aamusan u shaqeynayaan ayna weeraraan foormooyin badan oo faylasha ah. Frank Abagnale, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Semt Munaasabada Guusha Macaamiisha, ayaa sheegay in weerarrada DDoS ee iskudhafka ah ay ka muuqdaan weerarrada hareeraha zombie, iyo kombiyuutaro kala duwan ama kuwa mobile-ka ah oo aaney ka warqabin qatarta. Xakameynta botnet waa ururinta tiro badan oo ah qalab internet ama mid kombuyuutar oo ku xiran internetka, mid kasta oo ka mid ah baaskiil gaar ah - istick 50 watt manual. Boorsooyinka waxaa loo adeegsadaa in ay qabtaan weerarro kala duwan oo loo adeegsado adeegga, macluumaadka xado, u oggolow in ay weeraraan si ay u helaan qalabkaaga, iyo inaad u dirto emailka spam ama phishing links ee tiro badan.
Dhamaan computer-yada khaaska ah ee botnet iyo kombuyuutarrada waa kuwo xun:
Waa in aad maskaxda ku haysaa in aaney dhammaan botnets ay yihiin waxyeelo iyo xaasidnimo. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah shirkadaha antivirus waxay cusbooneysiiyaan siyaasadahooda iyagoo adeegsanaya botnets iyo isticmaalayaashu waa inay raacaan sharciyadooda iyo xeerarkooda. Microsoft ayaa dhowaan soo cusbooneysiiyey siyaasadeeda waxaana ay soo saartey dhowr biknishiin ah oo isticmaala dadka isticmaala oo ka hortagaya weerarada khatarta botnets. Sidaas darteed, rakibidda baaskiilada mashiinkaaga ma aha mid khatar ah oo dhan, waana in aan loo qaadin bixinta..Botnets waxaa la abuuraa marka barnaamijyada xaasidnimada ama fayrasku galaan qalab. Xakamaynta baaskiiladaha ayaa hawlaha qaar u xakameynaya aaladaha la jabsaday iyada oo la adeegsanayo kan isgaarsiinta sida HTTP iyo IRC. Boorsooyinka waxaa ka kireysta kuwa internetka ka soo jeeda oo ujeedooyin kala duwan ah.
Sidee loo dhigayaa internetka ammaanka ah?
Waa inaad rakibtaa tayada anti-nadaafadeed ama barnaamijka antivirus oo ah inuu noqdo mid asalka ah oo la bixiyo si aad u badiso ammaankaaga internetka. Ka sokow, waa in aanad marnaba riixin xidhiidhada shakiga leh iyo xayeysiiska quruxda leh iyo sidoo kale daaqadaha popup waa in aan la furin sababta oo ah waxaa laga yaabaa in ay ku jiraan khaanado tiro badan.
Malaayiin Billions oo PC ah ayaa si aamusnaan ah u qabadsiiyay botnets, abuuraya ciidamo baaxad weyn oo soo jiidasho leh si ay u xadaan ama u faahfaahiyaan faahfaahinta shakhsiyeed ee internetka. Qaar ka mid ah shabakadaha shabakadaha yar yar iyo kuwa waaweyn, sida Conficker, Zeus, Mariposa, BredoLab, iyo ZeroAccess. Dhammaantood waxay sugaan amarrada ka imanaya botaniska ka hor inta aanay bilaabin inay fuliyaan shaqadooda.
Taliyeyaasha macaamiishu waxay badanaa ka iibiyaan adeegga botnet-ga kuwa ugu fiican bixiya. Macaamiishu waa kuwa ka dhan ah basaasnimada ganacsiga, xisbiyada siyaasadeed, iyo burcad-badeedda online-ka ah, oo dhammaantood loogu talagalay inay carqaladeeyaan weerarrada internetka. Khatarta botnet waa qayb weyn oo ka mid ah muuqaalka nabadgelyada internetka, iyo botnets ayaa ka danbeeya tiro badan oo weeraro phishing ah. Sidaa daraadeed, ka-hortagiddooda waa qasab, waana inaan joojinnaa helitaanka xayiraadyada keyloggers, tuugada aqoonsiga, iyo weerarrada phishing. Kumbuyuutarrada maskaxda iyo khatarta caaradu waxay u gudbin karaan qalabkaaga, markaa waa inaad taxaddar samaysaa intaad shabakadaha internetka kala duwantahay.